ဂီတ - သူ၏အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော "Soleil Kréyol" ဒေးဗစ်ဝေါလ်တာသည် Afro ငံပြာရည်နှင့်ရောစပ်ပြီးဖြစ်သည် - TELES RELAY
ဂီတ - သူ၏အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော "Soleil Kréyol" ဒေးဗစ်ဝေါလ်တာသည် Afro ငံပြာရည်နှင့်ရောစပ်ပြီးဖြစ်သည်
By ချစ်ချစ် On စက်တင်ဘာ 13, 2020
ပါရီတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ မာဆေးမြို့တွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်မှာပါးပြင်ကျယ်ဂီတပညာရှင်လည်းကူးဖြတ်ကူးမွေးဖွားလိုသောရေရှည်ခရီးသွားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အစတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သောသူ၏အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည့်“ Soleil Kréyol” သည်အာဖရိကဆော့စ်နှင့်ပြန်လည်ရောစပ်ပြီးဖြစ်သည်။
ငါအမှန်တရားကိုပြောနေတာငါကျိန်ဆိုတယ်! » David Walters ကရယ်မောခြင်းနှင့်မဝေးလှ။ ၎င်းသည် quadra ပြောရန်မဖြစ်နိုင်သည့်တတိယဇာတ်လမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယခင်ကသူသည်ကိုလံဘီယာဒေသန္တရပညာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်Medellínခရိုင်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးခြင်း၏အာရုံကြောစင်တာသို့သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူ၏တီထွင်သူCésarLópezနှင့်သူနှင့်ရင်းနှီးခဲ့သည်။escopetarra, Kalashnikov မှတည်ဆောက်ထားသည့်ဂစ်တာ ...
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ Creole Creole Griot (မာတင်တီကန်မိခင်မှမွေးဖွားခဲ့ပြီး Saint-Kitts and Nevis ကျွန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဖခင်တစ် ဦး) ကိုသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနားထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သူသည်အာဖရိကနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုချဉ်းကပ်သောအခါသူ၏အသံသည်အနုပညာရှင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသော“ အစပြုခရီး” ကိုဖော်ထုတ်ရန်အထူးသဖြင့် ပို၍ လေးနက်သောအရောင်ကိုရရှိသည်။
သူမရှိသည့်ခရီးစဉ်သည်တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်သုံးခုကိုဘယ်တော့မျှဖြန့်ချိမည်မဟုတ်ပါ၊ Sun Kréyol, ဒီနှစ်အစောပိုင်းက Heavenly Sweet ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုလူထုနဲ့စာနယ်ဇင်းများကချီးကျူးခဲ့ကြသည်။
တိုက်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်သောအခါဒါဝိဒ်သည်နှစ်ဆယ်နှစ်ရှိပြီ။ သူသည် Bordeaux တွင်တပ်ဆင်ခဲ့ပြီးဂီတထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး Togolese အုပ်စုအတွက်စံပြတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ "ဂီတပညာရှင်တစ် ဦး ကငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်တယ်, သူသည်ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာငါ့အာဖရိကဇစ်မြစ်ရှာဖွေရေးအတွက်သွား, ကျိုး, ကာရစ်ဘီယံမှလူများ၏အကြီးအကျယ်ပြည်နှင်ဒဏ်နားလည်ရန် ... သူသည်မိမိအဘကိုခေါ်, ငါ့ရှေ့မှာ, သူ့ကိုနှင့်သူ့ကို သူက“ ငါသူ့ကိုအိမ်ပြန်လာတာနဲ့တူတူပဲLoméမှာလက်ခံရမယ်။ ” ရိုးရှင်းပါတယ်
ရင်းမြစ် - https://www.jeuneafrique.com/mag/1033749/culture/musique-david-walters-artiste-globe-tchatcheur/
DJ DJ ARAFAT ဂျိမ်းစ် Jacques KOUAMÉသေဆုံးမှု ARAFAT အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုသည် !!! - ဗီဒီယို
ရုပ်သံ 'Susan y El Diablo' သည် ၂၁း၀၀ နာရီအကြာတွင်သေဆုံးရခြင်း - ဗီဒီယို
ကင်မရွန်းတွင်ဒေသဆိုင်ရာ - အနောက်ကိုဘယ်သူ ဦး ဆောင်မှာလဲ။
DRC - ၂၀၂၃ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် Tshisekedi ကမဟာမိတ်အသစ်တွေကိုစည်းရုံးခဲ့တယ်